Inka Badan Konton Askari Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Weeraro Ka Dhacay Afghanistan. – Calamada.com
Inka Badan Konton Askari Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Weeraro Ka Dhacay Afghanistan.
calamada July 18, 2018 1 min read
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dagaallo culus ku qaaday saldhigyo maleeshiyaatka Maamulka Kaabul ay ka kala sameysteen Waqooyga iyo Bartamaha dalkaasi.
Dagaalka Kowaad waxey ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ay ku qaadeen saldhiga maleeshyaatka maamulka Murtad Ashraf Gani ay ka sameysteen deegaan hoostaga degmada Sayid Abad ee Wilaayada Meydan Work ee bartamaha dalka Afghanistan.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta fariisinka ciidan ee ay weerareen,iyadoona dagaalkan khasaara culus lagu gaarsiiyay maleeshiyaatka Daba dhilifka Kaabul.
Inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa lagu dilay 21 askari oo ah kuwa Murtad Ashraf Gani labo askarina nolasha ayaa lagu qabtay,sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan waxey dagaalkan ku gubeen saddex gaari oo noocyada gaashaaman ah tiro hubna weey qaniimeysteen.
Weerarka Labaad oo dagaal toos ah waxey ciidamada Mujaahidiinta Imaarada islaamiga ku qaadeen saldhig iyo fariisimo kale oo maleeshiyaatka Ridada Kaabul ay ka sameysteen deegaano dhaca duleedka degmada Imaam Saaxib ee Wilaayada Qunduuz oo dhacda Waqooyga Afghanistan.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkan lagu dilay 19 askari saddex iyo toban kalane waa lagu dhaawacay hal askarina nolasha ayaa lagu qabtay kuwaasi oo gabi ahaantooda ah kuwa maleeshiyaatka maamulka dowlada Saliibiyadda Mareykanka ay ka dhisatay Kaabul,waxeyna sido kale ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan gacanta ku dhigeen oo ay qaniimeysteen hub fara badan.
Weeraradan ka kala dhacay Waqooyga Iyo Bartamaha dalka Afghanistan ayaa qeyb ka ah howlgalka Al-khandaq ee ciidamada Mujaahidiinta dhaalibaan sida tooska ah kaga wadaan 34 Wilaaya ee uu ka koobanyahay dalka Afghanstan.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 05-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 06-11-1439 Hijri.